Fitaovana fanoratana atiny 10 tsy mampino ho an'ny marketing mahatalanjona | Martech Zone
Sarotra ny mahita teny mety hilazana ny hery sy ny omnipresence amin'ny fanoratana atiny. Mila votoaty tsara kalitao ny rehetra amin'izao fotoana izao - manomboka amin'ny bilaogera amateur ka hatramin'ny orinasa iraisam-pirenena manandrana mampiroborobo ny vokatra sy serivisiny.
Araka ny tatitra, orinasa mandray bilaogy no mahazo Rohy 97% fanampiny amin'ny tranonkalany noho ny namany tsy bilaogy. Ny fanadihadiana iray hafa dia manambara fa ny fanolorana bilaogy ho ampahany lehibe amin'ny tranonkalanao dia hanome anao vintana 434% tsara kokoa ho tonga laharana ambony amin'ny motera fikarohana.
Fa raha te-ho tonga mpanoratra mahomby ianao dia mila mampiasa ny rindranasan'ireo fampiharana zavakanto sy plugins. Ireo mpanampy dizitaly dia afaka manampy anao hanatsara ny asa soratanao, noho izany tohizo ny famakiana mba hijerena ireo fitaovana fanoratana atiny 10 tsy mampino ho an'ny marketing mahagaga.
1. Generator ho an'ny lohahevitra bilaogy
Tsy mora ny mahita hevitra momba ny atiny vaovao raha tsy maintsy mamoaka lahatsoratra ianao isan-kerinandro na isan'andro mihitsy aza. Izany no antony Hubspot mamolavola Blogger Topic Generator hanampy ny mpanoratra amin'ny fitadiavana ny lohahevitra tonga lafatra ho an'ny tranonkalany. Tsotra be ny fizotrany: ampidiro teny lakile ary haneho hevitra maromaro anao ny fitaovana.
Ohatra, niditra izahay -barotra ary nahazo ireto sosokevitra manaraka ireto:
Marketing: fanantenana sy zava-misy
Hitondra an'izao tontolo izao ve ny marketing?
Ny zavatra lehibe manaraka amin'ny marketing
Marketing dia nanazava tamin'ny litera 140 latsaka
Hubspot Blog Topic Generator Generator lohateny bilaogy FATJOE
2. Kitapo Keyword
Raha te hahita ny fomba fiasan'ny zavatra ivelan'ny Google Keyword Planner ianao dia mamporisika anao izahay hizaha ity fitaovanaKeyword ity. Ny sehatra dia afaka mamorona tolo-kevitra fanalahidy maharitra 700 mahery isaky ny teny fikarohana.
Ity fitaovana ity dia tsy mangataka akory anao hamorona kaonty manokana, mba hahafahanao mampiasa azy io maimaimpoana im-betsaka araka izay ilainao. Ny azonao antenaina amin'ny Keyword Tool dia ny mamantatra haingana ny fikarohana Google mahazatra indrindra ary mahita teny lakile izay mifanaraka tsara amin'ny filan'ny mpihaino kendrenao.
Ity misy iray amin'ireo ankafizintsika manokana, Coffitivity. Ity sehatra ity dia natao ho anao fanahy malalaka rehetra any izay mankafy miasa ivelan'ny birao nefa tsy mahazaka izany. Ny Coffitivity dia mamerina ny feo manodidina ny kafe iray hanamafisana ny fahaizanao mamorona sy hanampy anao hiasa tsara kokoa.
Manolotra karazan-kira manodidina, manomboka amin'ny mimenomenona maraina sy ny Café de Paris ka hatrany amin'ny efitrano fisakafoanana antoandro sy ny bistros any Brezila. Ny fahafaham-po dia manome anao fahatsapana miasa ao anaty atmosfera milamina sy mangatsiaka, izay tena mamporisika ireo mpanoratra maro.
4. Mijanona mifantoka
Ny fanemorana dia mpamono olona iray, fa misy fomba hiatrehana io olana io koa. Stay Focusd dia mampitombo ny vokatrao amin'ny famerana ny habetsaky ny fotoana azonao atao amin'ny tranokala mandany fotoana. Ahoana ny fomba fiasa?
Ny plugin dia mamaritra ny fotoana laninao amin'ny Internet ary manakana ny fiasa rehetra raha vantany vao lany ny fotoana nomena. Izy io dia manery ireo mangataka andro mba hifantoka amin'ny asan'izy ireo ary manampy azy ireo amin'ny fanatanterahana ny asany isan'andro sy ny tanjony. Misaotra ampahibemaso ireo mpiara-miasa aminay izahay Tany fanoratana lahatsoratra noho ny fampahafantarana anay an'ity fitaovana mahavariana ity!
Manodidina ny 500 ny mpanoratra manerantany no mampiasa teny 750 ho mpanampy manoratra sarobidy. Tanjona iray ihany no natao ity fitaovana ity - hanampiana ireo bilaogera hanaiky ny fahazarana manoratra isan'andro. Toy ny lazain'ny anarany ihany, ny tranonkala dia mamporisika ireo mpamorona atiny hanoratra teny farafaharatsiny 750 (na pejy telo) isan'andro. Tsy maninona izay soratanao raha mbola manao azy tsy tapaka ianao. Mazava ny tanjona: ho tonga aminao ho azy ny fanoratana isan'andro rehefa afaka kelikely.
Sarotra ny manoratra lahatsoratra bilaogy, saingy vao mainka sarotra ny manoratra lahatsoratra akademika avo lenta. Izany no antony ampiasan'ny mpanoratra sasany an'i Rushmyessay, maso ivoho izay mampiasa mpanoratra za-draharaha am-polony amin'ny sehatry ny fahaiza-manao rehetra.
Craig Fowler, lohan-doha at UK Careers Booster, milaza fa ny ankamaroan'ny Rushmyessay dia manakarama olona manana mari-pahaizana Master na PhD izay miantoka ny fandefasana haingana sy ny kalitaon'ny avo indrindra. Ny tena manaitra kokoa aza dia ny fanoloran'i Rushmyessay mpanjifa fanampiana 24/7 ho an'ny mpanjifa, mba hahafahanao mandefa hafatra na manome antso azy ireo isaky ny tianao izany.
7. rajako fanadihadiana
Ny lahatsoratra tsara indrindra dia manaitaitra sy mahaliana, noho izany dia mitaona ny mpampiasa izy ireo handray andraikitra amin'ny fametrahana fanontaniana na fametrahana hevitra. Raha te hampifandray kokoa ny lahatsoratra ianao dia tokony hampiasa Survey Monkey. Mpamorona fanadihadiana tsotra mamela anao hamolavola sy hamoaka ny valim-panadihadiana an-tserasera ao anatin'ny minitra vitsy. Amin'izany fomba izany dia azonao atao ny mamela ny mpanaraka anao hanapa-kevitra ny zava-dehibe ary hampiasa azy io ho loharanom-aingam-panahy ho an'ny bilaogy amin'ny ho avy.
Ny famoahana lahatsoratra tsy misy fanitsiana dia hevitra tsara velively. Tokony hizaha ny sombin-tsoratra rehetra mba hahazoana antoka fa tsy misy lesoka amin'ny tsipelina na fitsipi-pitenenana. Na izany aza, ity dia mety ho lahasa goavambe raha te-hanao izany amin'ny tanana ianao, noho izany dia manolotra anao izahay hampiasa Grammarly. Ny plugin fanamafisam-peo malaza dia afaka manamarina ny lahatsoratra rehetra ao anatin'ny segondra ary manasongadina ireo lesoka, lahatsoratra be pitsiny, ary antsipiriany maro hafa izay mahatonga ny atiny tsy lavorary.
9. Mpitrandraka Ggrade
Raha tsy tianao ny masinina manamboatra ny lahatsoratrao dia misy vahaolana mora hafa. Tonga amin'ny endrika GgradeMiners, maso ivoho manoratra sy fanovana miaraka amina am-polony tonian-dahatsoratra. Mila miantso azy ireo fotsiny ianao dia homen'izy ireo haingana mpitantana kaonty izay handray an-tanana ny raharaha. Amin'ny fampiasana an'ity serivisy ity dia afaka manantena zavatra kely noho ny fanovana tonga lafatra sy ny fahendrena ianao.
Ny fitaovana farany ao amin'ny lisitray dia azo antoka fa iray amin'ireo mahaliana indrindra. Cliché Finder dia manampy ny mpanoratra handoto ny atiny amin'ny famaritana sy fanasongadinana ireo teny na andian-teny diso tafahoatra. Ny ankamaroan'ny olona dia tsy miraharaha an'io olana io, fa ho gaga ianao mahita ny isan'ny klise misy amin'ny fanoratana an-tserasera. Amin'ny maha mpanoratra matotra anao dia tsy tianao avela hitranga aminao koa izany, koa ampiasao i Cliché Finder hanafoanana ilay fandrahonana.
Ireo bilaogera tsara indrindra dia tsy vitan'ny hoe mahay sy mamorona fa mahomby amin'ny fampiasana fampiharana an-tserasera sy plugins. Izany dia manampy ny mpanoratra hanoratra haingana kokoa ary hamorona lahatsoratra tsara kokoa isan-kerinandro, izay ny fepetra mialoha ho lasa mpamorona atiny avo lenta.
Nasehonay anao ny lisitr'ireo fitaovana fanoratana atiny 10 tsy mampino izay afaka manampy anao manatsara ny hetsika ara-barotra. Hamarino tsara fa hijery azy ireo ianao ary manoratra hevitra raha manana soso-kevitra mahaliana hafa hizara aminay ianao!
Disclosure: Martech Zone dia mampiasa ny rohy mifandray aminy ho an'ny Grammarly ato amin'ity lahatsoratra ity.
Tags: mpamorona lohahevitra bilaogyfitiavan-tenamaika ny diarikofitaovana fanoratana